Mumufirimu waBeyoncé, Black ndiye King… uye bling-bling - Jeune Afrique - Tamban RELAY
Mumufirimu waBeyoncé, Black ndiye King ... uye bling-bling - Jeune Afrique
By TELES RELAY On Nyamavhuvhu 6, 2020
Beyoncé mu bhaisikopo "Nhema ndimambo" ©
Beyoncé mu bhaisikopo "Black ndiye mambo"
© Parkwood Varaidzo / Disney
Nerwiyo rwake rwekuona "Black ndiMambo", Beyoncé anodzokorora iro Shumba King ndokuburitsa rondedzero yenhoroondo dzevatema vachipokana nemashure ekupa simba. Chinzvimbo chinovhiringidza pakati pekusimudzira tarenda reAfrica uye vatema capitalism.
Kurwisa pasina kugadzira mafungu. Nekudaro, ino bhaisikopo inoimbwa nemazita ese eByoncé achangoburwa opus, Shumba Mambo, Chipo, inovavarira kudzosera nhoroondo yevatema nekuratidza mhedzisiro iyo kurwadziswa uye zvibayiro zvemadzitateguru eAfrica akashinga pazvizvarwa zvakatevera.
Asi se Black Panther, iyo bhaisikopo yeiyo Marvel Franchise, ino yakareba clip clipy inopa kudada kwenzvimbo kune afro-tariro uye kune Africa, kana zvisinga fungidzike, yakafungidzirwa. Tinogona kutarisira zvimwe kubva kuDisney kugadzirwa uye nyeredzi yepop? Beyoncé anoita zvaanoziva kuita zvakanakisa: kurudzira.
Iye muenzaniso wekubudirira uye anoimba iyo nekurira uye yakajeka mukati Manzwiro 4 Eva, chimwe chezvimedu chinobaya chetatu chekutanga chefirimu firimu. Anosimuka padivi murume wake rapper nemurume wemabhiridha murume Jay-Z, ruoko neruoko, kumberi kwependi kunomumirira saMadonna akakomberedzwa nevana vake vakaremerwa.
Chiokomuhomwe, kuwanda uye zvombo zvehondo: sei Niger akarasikirwa makumi emabhirioni - Jeune Afrique
[Tribune] Tunisia iri kurasikirwa zvikuru netarenda rezvematongerwo enyika - Jeune Afrique